Asa tsotra. Mijery ny dokam-barotra dia mahazo 10 cents amin\_\_’ny kaontinao ianao ho an\_\_’ny fampisehoana vondrona misy dokambarotra.
Tsy voafetra ny fidiram-bolanao ary miankina amin\_\_’ny fotoana laninao eo anoloan\_\_’ny PC-nao.
Miasa mandritry ny ora 3 ka hatramin’ny 5 isan’andro eo ho eo ianao dia afaka mahazo karama 50 $ hatramin\_\_’ny 300 $ na mihoatra ny kaontinao.
Ny vola voaangona rehetra dia voatahiry ao amin\_\_’ny kaontinao manokana na kaonty elektronika ary azo alaina ao anatin\_\_’ny 1 ora. Andramo dia mahazahoa volabe. Fa aza mety angalan’ny site vola fotsiny.